Waxa sawirkan ka muuqda ayaa ah jiritaanka labadiisa bini aadam ee waaween iyo kan Fircoon midigta. Waxaan si fudud ku soo gunaanadi karnaa in labadan bini aadam ee ... Akhri wax dheeraad ah
Sidii ay ku sameeyeen Kemet (Mad madow), wadanka Hind (Hind = Madoow) oo leh erayga "Aryans" oo macnaheedu yahay "Noble", sidii horeba Sumer (Madax madow). Muddadan ... Akhri wax dheeraad ah
Suunka 'anti-negroid belt' ee bini-aadamku wuxuu ku fiday adduunka qadiimka ah laga soo bilaabo Afrika illaa Malaya. Suumantan (la siiyay) Waxaa sii daayay dadka reer Xamri ee Afrika, ... Akhri wax dheeraad ah
Gabdhaha qaaliga ah / Afrikaanka, waxaad rumeysan tihiin Ilaaha Cad, waxaad sidoo kale rumeysan tihiin wiilkiisa keliya, Ciisihii reer Naasared ama kii reer Galili, sidoo kale nin cad. Caawimaad deg deg ah ayaad rabtaa ... Akhri wax dheeraad ah
Xitaa haddii unicornku kicin doono xiisaha qorayaasha sida falsafada Aristotle ama Pliny Odayga kaas oo soo bandhigi doona sawir dhammaystiran, unicornkan wuxuu qaadan doonaa ku dhawaad ​​2000 sano ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 26, 2020 4: 44 No Comments
Waxay ka kooban tahay qaadista iyo ruxitaanka seddex jeer iyadoo la akhrinayo qoraalka ku habboon. Digaagga ayaa markaa la gowracayaa iyada oo la raacayo habka loo yaqaan 'halakhic' oo qiimaha lacageedana la siiyo ... Akhri wax dheeraad ah
Dhaqanka iyo dhaqanka dadka Madowga ah maahan wax loo kala dhan yahay: in la caddeeyo Ilaahiisa, ninka cad wuxuu horumariyay, qarniyo badan, aragtiyaha jinniyo ee dhammaan wixii la xiriira dhaqanka ama dhaqanka dadka madowga ah.
Taariikhda ilbaxnimada Afrika "Leo Frobenius" In 1906 markii aan soo galay dalka reer Kasai Sankuru, weli waxaan helay tuulooyinka kuwaas oo wadooyinka ugu muhiimsan ayaa damacsan dhinac kasta
Dulucda muujinta iyo riyooyinada wadaadada reer Kongo / afrikaanka: wax kasta iyo waxba kama jiraan agagaarka muujinta iyo himilooyinka wadaaddada reer Kongo / Afrikaanka, xaalad kasta oo jirta, waxaa jira cunno iyo cabbitaan taas
Elijah McCoy, Inventor ee Qaybaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka: Invention McCoy wuxuu caawiyay Tareenada si dhakhso ah iyo si wax ku ool leh
Nolosheena waxay ku abuurtay taariikhda aduunkan geeskasta oo meeraha ah “Aasaaska”